Warka - Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Si Loogu Sameeyo Dabaqyada Baabuurka
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mats Goorta Gaariga
Markaan u baahanahay inaan soo iibsanno sagxadaha gaariga, sidee loo helaa soosaaraha ugu fiican?
Waxaad ka raadin kartaa Google "warshadda carrada gawaarida", ka dib waxaad ka heli kartaa degello badan, waxaadna u baahan tahay inaad xukuntid taas oo ah warshadda dermaha baabuurta ee aad u baahan tahay, iyo inaad iska hubiso waxyaabaha salliga gaariga ay tahay waxaad u baahan tahay. Waxaa jira waxyaabo noocyo kala duwan ah oo loogu talagalay dermaha gawaarida: rooga, dermaha gaariga PVC, dermaha gaariga maqaarka, Gogosha gawaarida Rubber,Gogosha gaariga TPE, Gogosha baabuurta ee TPR.
Marka xigta waxaad ubaahantahay inaad hubiso tayada gogosha gaariga, derbiyada gawaarida badan waxaa lagu sameeyaa caaryada nooc kasta oo gawaari oo kala duwan ah, marka waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso inay warshaddu leedahay moodooyinka gawaarida ee aad u baahan tahay oo aad u baahan tahay inaad hubiso haddii tirada aad u baahan tahay ay tahay waa hagaag in la soo saaro, warshadda badankood waxay leeyihiin MOQ weyn. Warshaddeenu waxay leedahay dermaha gawaarida diyaar u ah inta badan gawaarida gawaarida, MOQ-du waa midkiiba 5, waxaanna leenahay boqolaal dermo baabuur iyo gogol-dhigyo dermo jir ah.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato haddii warshaddu kuu sameyn karto caaryo, maxaa yeelay amarkaagu wuu ka weynaan doonaa derbiyada baabuurta TPE ee tayada wanaagsan leh, sidoo kale waxaad heli doontaa xoogaa macmiil ah oo u baahan inay ku sameysmaan caaryo qaababkooda iyo astaantooda gaarka ah, waxay ku tusi doontaa farqiga ulaha gawaarida ee suuqa. Qaabka wanaagsan ayaa kuu keeni doona iib wanaagsan wuxuuna soo jiidan doonaa macaamiil badan oo cusub. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad xasiliso macaamiishaadii hore. Meheraddaadu aad ayey uga weynaan doontaa iyada oo gogosha sagxadda baabuurkeenna TPE ah. Warshadeenu waxay sameyn kartaa qaabka iyo astaanta cabbirkaaga codsi, waxay kuu oggolaan doontaa inaad ka soocnaato iibiyeyaasha badan.
Qodobka ugu muhiimsan waa tayada, tani waa mid aad muhiim u ah, oo leh tayada wanaagsan, waxaad ka iibin kartaa macmiil badan, macaamilkuna wuxuu si fiican u iibin doonaa tayada wanaagsan, ka dibna waxay weyneeyaan tirada dalabka mustaqbalka. Tani sidoo kale waa qayb aad muhiim u ah. Tani sidoo kale waa ujeedada warshaddeena. Waxaan u isticmaalnaa waxyaabaha ugu fiican TPE ee derbiyada gaariga iyo dermaha jirridda, laakiin qiimo la mid ah warshad kale. Waxaan haysanaa faa'iido yar, laakiin macaamiisha oo dhan waxay ka soo iibsadeen waxsoosaarka warshadeena waxay kaheli karaan 5 xiddig oo jawaab celin wanaagsan kahelaya dhamaan macaamiisha, Hal mar noqo macaamilkeena, waligiis noqo macaamilkeena. Waxaan dhiseynaa waqti dheer wadashaqeyn dhamaan macaamiisha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee wax soo saarkeenu waa adeegsiga qiime isku mid ah si alaabtu u wanaagsanaato, waxaan dooneynaa inaan si fiican u wanaajino.
Qodobka ugu dambeeya ee aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato waa xirmada iyo rarka. Warshada tayada yar waxay adeegsan doontaa tayada hooseWaxyaabaha TPEwaxayna sidoo kale isticmaali doonaan xirmada tayada hooseysa. Waxyeello ayey u geysan doontaa gogosha baabuurka, aad ayey muhiim ugu tahay xirmada.
Waxaan ku xirxiran karnaa seddex kumbiyuutar oo kasta (sariirta darawalka, sariirta rakaabka, derin dambe) hal kartoon, waxaanna ku daabacan karnaa astaanta gaarka ah kartoonka. Sidan oo kale, waxaan toos ugu diri karnaa cinwaanka aad u baahan tahay ama waxaan u diri karnaa amazon bakhaar. Waxaan sidoo kale xirxiran karnaa 20 kumbuyuutar kartoon kasta, qaabkan wuxuu keydin karaa boos, ka dibna badbaadin karaa qiimaha dhoofinta badda, macaamilku wuxuu ku xiranayaa kartoonkiisa u gaarka ah ka dib marka la helo.